बिहे भएको पुरुषसंग किन हुरुक्कै हुन्छन युवतीहरु ? - Nawalpur Dainik
बिहे भएको पुरुषसंग किन हुरुक्कै हुन्छन युवतीहरु ?
हरेक महिला आफ्नो पा’र्टनर आफुले सोचे जस्तो होस् आफुलाई माया गर्ने आफुलाई बुझ्ने खाल को होस् भन्ने चाहान्छन त्यसैले युवतीहरु आफु भन्दा अलि बढी नै उमेर भएको पुरुष लाइ मन पराउने गर्दछन तर कोहि युवती भने बिहे भएको पु’रुष लाइ मन पराउने गर्दछन का’रण यस्तो छ हेर्नुहोस
हाम्रो समाजमा अधिकांस जोडीको उमेर ज्यादै फरक हुन्छ । केही अपवाद छोडेर सबैजसो जोडीमा पु’रुषको तुलनामा म’हिलाहरु कम उमेरका नैहुने गर्दछन्। खासमा पु’रुषले आफू भन्दा कम उमेरकी महिला खोजेर यस्तो भएको होइन बरु महिलाहरु नै आफू भन्दा पाको उमेरको पु’रुषसँग स’म्बन्ध राख्न चाहन्छन्। हालसालै गरिएको एक अ’ध्ययनले यस्तो देखाएको छ ।
सु’रक्षित केटीहरुले आफू भन्दा पाको उमेरका पुरु’ष खोज्नुका धेरै कारण छन् । खासमा पाको उमेरका पु’रुषसँग उनीहरुलाई सु’रक्षित महसुस हुन्छ । पाको उमेरका पु’रुषहरु आर्थिकरुपले पनि बलिया हुन्छन् भन्ने विश्वास हुन्छ । उनीहरुमा जीवनको अनुभव पनि धेरै हुन्छ । पाको उमेरका पुरु’षसँग म’हिलाले सु’रक्षित महसुस गर्छन् ।
समझदारी महिलाका भावनात्मक कुरा पाको उमेरका पुरुषले बढी बुझ्छन् भन्ने बुझाइ युवतीमा हुन्छ । महिलाहरुको भावना बुझ्न कम उमेरकाले नसक्ने र उनीहरुलाई तारिफ पनि पाका उमेरका पु’रुषले गर्ने हुँदा उनीहरुलाई पाका उमेरका पुरु’ष चाहिन्छ । आफ्नै उमेरका वा कम उमेरका पुरु’षबाट यी कुरा नपाइने हुँदा युवती पाका उमेरका पुरुष छान्छन् ।
दुनियाँको ज्ञान पाको उमेरका पु’रुक्षमा बाहिरी दुनियाँको ज्ञान बढि हुन्छ । आफ्नो प्रेमी वा पतिले आफूलाई दुनियाँका विभिन्न कुराबारे जानकारी दिएको म’हिलाहरुलाई मन पर्छ । यस्ता पु’रुषमा सही या गलत छुट्टाउन क्ष’मता हुने पनि महिला ठान्छन् । खासमा यु’वतीहरु हरेक प्रश्नको जवाफ पति वा प्रेमीले नै देओस भन्ने चाहन्छन् ।
शान्ति महसुस म’हिलाहरु छिटो आत्तिने र रिसाइरहने हुन्छन् । साना साना कुरामा पनि आत्तिनु र रिसाइ हाल्ने महि’लाको बानी हो । त्यसकारण यस्तो कुरा बुझ्नका लागि र सम्हाल्नका लागि पाका उमेरका पु’रुषको खोजीमा युव’तीहरु हुन्छन् । आफूलाई मा’नसिकरुपमा सम्हाल्न सक्ने र ढाडस दिन सक्ने पु’रुषलाई पति वा प्रे’मी बनाउन म’हिलाहरु उद्दत हुन्छन् ।
धोका नदिने कम उमेरका पु’रुषको तुलनामा पाका उमेरका पु’रुषले धो’का दिने ख’तरा कम देख्छन् महि’लाहरु । खासगरी कम उमेरका पु’रुषहरु चंचल हुने र भेटे सम्म अन्य के’टीहरुलाई हेरि हाल्ने ड’र महिलामा हुन्छ । उनीहरु चाहन्छन् आफ्नो पति वा प्रेमीले अन्य महिलालाई नहेरोस् । त्यसकारण पाको उमेरका पु’रुष छान्छन् यु’वतीहरु ।
अ’नुभवी महिलाहरुलाई यस्ता पु’रुष चाहिन्छ जो अनुभवी हुन् । जीवनका अनेक अनु’भव भएका पु’रुष उनीहरुलाई मन पर्छ । उनीहरु चा’हन्छन् आफ्नो पा’र्टनर यस्तो होस् जसमाथि हरेक कुरामा भर गर्न सकियोस् । म’हिलाहरुलाई आफ्नो प्रेमीलाई शहरका सबै रेष्टुराँ र फिल्महलको समेत जानकारी होस् भन्ने चाहन्छन् ।
Prevतपाईंको हातमा कहिल्यै पैसा टिक्दैन ? भुलेर पनि नगर्नुहोस् यी ४ कुराहरू !
Nextशुभ बिहानी, धन लाभ हुनु’अघि मिल्छन् यस्ता संकेत; पढिसकेपछि ॐ लेखी शेयर गर्नुहोस्